Jacquard dhar-jacquard jacquard dhar-Shaoxing Dareemo Cirbadda Dharka Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>Summer>dhar jacquard ah oo la tolay
Jilicsan, jilicsan oo jilicsan, dhalaal wanaagsan, jajab wanaagsan iyo hawo hawo, xawaare midab wanaagsan (dheeh dun). Qaabka dharka weyn ee jacquard-ka waa mid weyn oo aad u fiican, oo leh lakabyo midabbo kala duwan leh iyo dareen xoog leh oo saddex-cabbir leh, halka qaabka marada yar-yar-yar-yar-yar yahay mid fudud oo keli ah.
Dareem jilicsan, ganaax iyo jilicsan, dhalaal wanaagsan, jajab wanaagsan, hawo hawo wanaagsan, midab fiican oo ku xirnaanta (dheehida dunta). Dharka waaweyn ee jacquard-ka ayaa leh qaabab waaweyn oo jilicsan oo leh lakabyo midabbo kala duwan leh iyo dareen xoog leh oo saddex-cabbir leh, halka dharka yaryar ee jacquard-ka ay leeyihiin qaabab fudud oo fudud.
The monochrome jacquard waa dharka midabkiisu jacquard yahay - maryaha waxaa marka hore lagu xiraa jacquard loom ka dibna waa la midabeeyaa waana la dhammeeyaa. Dharka dhammaaday wuxuu leeyahay midab saafi ah. Jacquard midabkeedu badan yahay waa dhar jacquard ah oo midabkiisu yar yahay - marka hore la midabeeyo ka dibna lagu tolo jooniska jacquard, ugu dambayntiina waa la dhammeeyaa, sidaa darteed dharka jacquard-dunta midabkiisu ka badan yahay wuxuu leeyahay in ka badan laba midab, midabka dharku waa mid hodan ah, oo aan caajis ahayn, qaabka saddexaad - dareenka cabirka ayaa ka xoog badan, darajo sare leh. Ballaarta dharka ma ahan mid xadidan, dharka suufka saafiga ah wuxuu leeyahay yaraansho yar, kubad ma leh, ma libdho. Dharka Jacquard guud ahaan waxaa loo isticmaali karaa qalabka wax soo saarka dharka darajada sare iyo dhexe ama qalabka warshadaha qurxinta (sida daahyada, qalabka sii deynta ciidda) process Habka wax soo saarka dharka Jacquard waa mid adag. Dufanka iyo weft-ka ayaa kor iyo hoos u tola, oo yeelanaya qaabab kala geddisan, iskudhaf iyo jileec, ubaxyo tolmo leh, shimbiro, kalluun, cayayaan, shimbiro iyo xayawaan iyo qaabab kale oo qurux badan
Jacquard Monochromatic waa dhar jilicsan oo jacquard ah - maryaha ayaa marka hore lagu tolayaa xarig jacquard ah, ka dibna la midabeynayaa oo la dhammeeyaa. Dharka dhammaaday waa midab saafi ah. Jacquard-ka midabbada badan leh waa midab jilicsan oo midabkiisu jilicsan yahay - marka hore waa la midabeeyaa, ka dibna waxaa lagu dhejiyaa dharka jacquard, ugu dambayntiina waa la dhammaystiray, sidaa darteed dharka jacquard-dunta ah ee jilicsan ayaa ka badan laba midab, midabka dharku waa mid hodan ah, oo aan midab lahayn, qaab saddex-cabbir leh adag, darajo sare Ballaarta dharka ma aha mid xadidan, maro cudbi ah oo saafi ah.
Hoos u yareyn, kiniin la'aan. Dharka Jacquard guud ahaan waxaa loo isticmaali karaa qalabka wax soo saarka dharka heerkiisu sareeyo ama qalabka warshadaha qurxinta (sida daahyada, qalabka saacadaha). Nidaamka wax soo saarka ee dharka jacquard waa mid adag. Mawduucyada dunta iyo dunta ayaa isku xiraya kor iyo hoos si ay u sameeyaan qaabab kala duwan, kuwaas oo tollan qaabab qurux badan oo ubaxyo ah, shimbiro, kalluun, cayayaan, shimbiro iyo xayawaanno.